15 ducadood oo salaadda looga hor tago jinniyo carqaladaynta | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 15 salaadood oo ka soo horjeedda jinniyo carqaladeeya
15 salaadood oo ka soo horjeedda jinniyo carqaladeeya
7 Irdahow, madaxyadiinnii kor u qaada, Oo albaabbada xidid, albaabbada daa'imiska ahow, kor ha laydiin qaado, Oo waxaa soo geli doona Boqorka ammaanta.
Waa maxay xannibaadda jinniyo? Kuwani waa xoogag kaa horistaagaya dhibcaha guushaada. Ciidamadaani waa xoog shaydaanimo oo ka dhex jira reeraha, waa xoog xoog leh oo hubiya in qofna ku guuleysto wax qoyskaas ka mid ah. 15 ducooyin oo salaadda ka hor tagta jinniyo carqaladeeya ayaa ku siin doona guusha aad rabto. Markii aan tukanayno, waxaan soo saarnaa awood la yaab leh, xoogga Ilaah ayaa lagu muujiyaa annaga markaan tukanno. Si aad nolosha uga adkaato, waa inaad iska caabisaa jinniyadaan carqaladeeya ee bedelka salaadda.
Waa inaad si xoog leh u duceysaa si aad naftaada uga samatabbixiso qabashada jinniyadan sharka leh. Ilaaheenna ma jiro wax ku adag inuu sameeyo, sidaad maanta ugu baridaan, isagu wuu kuu sara kici doonaa, wuuna isdifaaci doonaa. Isaga ayaa is muujin doona isaga oo xoog leh noloshaada sidii hore oo aan waligeed aheyn. Qodobbada salaadda ee ka dhanka ah jinniyo-joojintu waxay kuu horseedi doonaan xorriyaddaada guud. Haddii aad tukashadani ugu ducayso iimaan, waxaan u arkaa ruux kasta oo caqabad ku haya noloshaada iyo qoyskaaga inay weligood ku dhex faafayaan magaca Ciise. Waxaan kugu arki doonaa dusha sare.
1. Aabe, waxaan kuugu mahadnaqayaa inaad si xoog leh igaga hormarisay magaca Ciise.
2. Waxaan cadeynayaa in jidadkeygu had iyo goor kaamil buuxin doonaan, oo caqabadda dambe magaca Ciise aan mar dambe jiri doonin.
3. Waxaan amar ku bixinayaa ruux kasta oo caqabad ku haysa nolosheyda ruuxiga ah inay ka fogaato nolosheyda magaca Ciise.
4. Waxaan amar ku siinayaa ruux kasta oo caqabad ku haysa koritaanka jirkayga (caafimaadka caqliga leh) in lagu burburiyo magaca ciise.
5. Waxaan amar ku bixinayaa caqli kasta oo caqabad ku noqota kobocdayda dhaqaale iyo shaqadaba in ay ku faafiyaan magaca ciise.
6.Waxaan farayaa carqalad kasta oo shaydaan ku taagan ee jidka igu haya inaan masiirka ka saarno hadda !!! Magaca Ciise.
7. Nin kasta oo shar leh ama haweeney kasta oo taagan wadada ugu sareysa ha lagu burburiyo dabku hadda magaca Ciise.
8. Aabo, i sii aqoonta saxda ah ee igu dili doonta magaca sare ee Ciise
9. Aabe wuxuu kashifayaa saaxiib kasta oo shar ah si qarsoodi ah ula dagaallamaya horumarkayga ee magaca Ciise aamiin
10. Sayidow, kuwa kala firdhiyey oo dhan u kala firidhso magaca nolosheyda.
11. Malaa'igtaada ha fogeeyeen wax kasta oo lagu turunturoodo oo taagan jigayga xagga sare magaca Ciise
12. Waxaan cadeynayaa in shaydaan kasta oo hor taagan iridaheyga furan in lagu barakiciyay magaca ciise.
13. La-taliye kasta oo shar leh oo noloshayda ah, weligay aamusiin magaca Ciise
14. Waxaan caddaynayaa in jinni kasta oo ilaaliya oo noloshayda ah, inuu weligiis indha la 'yahay magaca Ciise.
15. Waxaan cadeynayaa in shay kasta oo ku saabsan warbaahinta bulshada in nolosheyda lagu aamusiin doono magaca Ciise weligiis.
article Previous20 Salaadda Dagaallada Qodobbada ka dhanka ah cadawga horumarka
Next article20 mfm salaadda tukashadeeda raali ahaanshahooda
Christopher Ramlal Diseembar 18, 2020 saacadu markay ahayd 4:17 pm
Galab wanaagsan, ma haysaa goob codsi duco lagu weydiisto mise dadka si gaar ah ayaad ugu tukataa? Waxaan ubaahanahay duco dhabarka iyo guud ahaan caafimaadka, ma aqaano inay tahay weerar ruuxi ah oo ka dhan ah caafimaadkeyga, waad ku mahadsan tahay: Christopher Ramlal.
30 Tukashada Dambi Dhaaf iyo Hanuun
Qodobbada Salaadda ee Geesinimada
10 Qodobbada Salaadda Kahor Daraasadda Kitaabka Quduuska ah